बिटुलो आख्यान | आरोहण गुरूकुल | विराटनगर
मिती : २०७५ फागुन २१
इतिहास लेखन राजनीतिक कर्म हो । इतिहासविद् इ.एच.कारले भनशे जस्तो इतिहासमा कस्ता तथ्य उल्लेख छन् भनेर बुझ्नु अघि इतिहासकार को हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । शक्ति र सत्तामा रहेकाले बताएका इतिहासले कस्तो राजनीतिको पृष्ठपोषण गरेको छ भनेर चासो राख्न थालिएको धेरै भयो । ‘बिटुलो आख्यान’ नाटकले यही विषयलाई इतिहासबा‍रे फरक बुझाई राख्ने पात्रहरु बीचका बौद्धिक घर्षण एवम् संवादबाट दर्शाउन खोजेको छ । यस नाटकका पात्रहरुका लेखन, राजनीति, समाज र खासगरी इतिहासबा‍रे बुझाईसँग सम्बन्धित घटनाको नाटकीयताबाट समेत इतिहास लेखनको जटिलता उजागर गर्न खोजिएको छ । धेरै मुलुकहरुमा राज्य एवम् शासकले लेखाएका र प्रचार गराएका इतिहासमाथि सन्देह गरियो । खासगरी, अल्पसँख्यक र बहिष्कृत, निम्नवर्गीय मजदुर र किसान, सत्ता–इतरका बौद्धिक र अन्वेषकहरुले मुलधारको इतिहासमाथि प्रश्न उठाए । यी प्रश्नले इतिहास ’boutका नयाँ अनुसन्धान गर्न मिल्यो । तर यो काम सहज भएन । त्यसरी प्रश्न गर्ने र इतिहास’bout नयाँ खोज गर्ने क्रममा ठूला बौद्धिक घर्षण एवम् संघर्ष निम्तियो । त्यस्तैखाले द्वन्द्व व‍र‍पर ‘बिटुलो आख्यान’ को रचना गरिएको हो ।
लेखक उज्जवल प्रसाईले नाटक लेखेर पठाउनु भयो । हामीले सरसर्ती पढ्यौ । नाटक मन पर्यो । खासमा यो नाटकले समाजलाई नयाँ सन्देश प्रवाह गर्छ भन्‍ने लाग्यो । तेसैले सिंगो टिम नाटक गर्न सहमत भयो । नाटक गर्न सहमत त भयौ । तर, हाम्रा लागि मुख्य चुनौती थियो यो नाटक । इतिहाससंग सम्वन्धित भएकाले पनि चुनौती हुनु स्वाभाविक नै थियो । तर, चुनौती सामना गर्ने निधो भयो । जहाँ वढी चुनौती र जोखिम हुन्छ त्यहा काम गर्नुको मज्जा नै वेग्लै हुन्छ । साच्चै मज्जा आयो यो नाटक गरिरहँदा । सत्ताले हामीलाई कस्तो इतिहास पढ्न वाध्य पारयो ? इतिहासमाथि प्रश्न गर्दा सत्ता किन डरायो ? आदि विषयमाथि नाटकले कडा वहस गरेको छ । आशा छ दर्शकले नाटक रुचाउनु हुने छ । साथै लेखक प्रसाई, कलाकार साथीहरु र सिंगो थिएटर टिमप्रति आभारी छु ।
लेखक : उज्वल प्रसाईँ
निर्देशक: गणेश बस्नेत
0 comments on “बिटुलो आख्यान”